Midowga Yurub oo taageero u muujiyay Giriiga iyo Turkiga oo ciidamo u diraya xadka uu la wadaago dalkaas | Berberanews.com
Home WARARKA Midowga Yurub oo taageero u muujiyay Giriiga iyo Turkiga oo ciidamo u...
Midowga Yurub oo taageero u muujiyay Giriiga iyo Turkiga oo ciidamo u diraya xadka uu la wadaago dalkaas
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay ciidamo tiradoodu gaareyso 1,000 askari u direyso xadka ay la wadaagto Giriigga, si ay u hakiyaan howlgallada ay Giriigga dib ugu soo riixayaan qaxootiga ka gudbay dhinaca Turkiga.
Ankara ayaa hadda dooneysa inay ciidamadeedu hor istaagaan tallaabada ay ciidanka Giriigga dadka qaxootiga ah dib ugu soo celinayaan.
Kumannaan qaxooti ah oo aad u doonaya inay u tallaabaan Qaaradda Yurub ayaa wali ku sugan xadka u dhaxeeya labada waddan.
Ciidanka ilaalada xuduudda ee Giriigga ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsday si ay dadkan uga celiyaan inay dalkooda galaan.
Askarta dheeraadka ah ee Turkiga ayaa tagaya wabiga Meric ee ku yaalla xadka (oo luuqadda Giriigga lagu yiraahdo Evros), sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha, Suleyman Soylu.
Midowga Yurub ayaa canbaareeyay tallaabada ay qaadday dowladda Turkiga.
Dowladda Giriigga ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay tan iyo maalintii Sabtida soo galitaanka sharci darrada ah ka hor istaageen 34,778 ruux, 244 qofna ay xireen.
Qaxooti u kala dhashay dalalka Suuriya, Afghanistan, Pakistan iyo Galbeedka Afrika ayaa ka mid ah dadka ku sugan xuduudda.
Midowga Yurub oo taageero u muujiyay Giriigga
Bayaan uu soo saaray Golaha Midowga Yurub – oo matalaya 27-ka waddan ee xubnaha ka ah – ayaa lagu yiri: “Goluhu wuxuu taageero iyo naxariis u muujinayaa Giriigga, wuxuuna si adag u cambaareynayaa tallaabada uu Turkiga Qaxootiga ugu adeegsanayo cadaadis dano siyaasadeed leh”.
Ku dhawad isbuuc ka hor ayey ahayd markii uu Turkiga ku dhawaaqay inuusan usii hoggaansami doonin heshiiskii xakameynta qaxootiga u tallaabaya Yurub ee la gaaray sanadkii 2016-kii, isagoo Midowga Yurub ku eedeeyay inay wax jawaab ah ka bixin waayeen qaxootiga kasoo qulqulaya waddanka ay dagaallada sokeeye ka socdaan ee Suuriya.
Turkiga ayaa hadda marti galiya 3.7 malyan oo Qaxooti reer Suuriya ah, ku dhawaad hal malyan oo kalena waxay ku sugan yihiin xadka dhinaca Konfureed ee uu la wadaago Suuriya, kaddib markii ay kasoo barakaceen dagaalka ka socda gobolka Idlib.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa magaalada Moscow kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo dadaal cusub u sameynaya in xal loo raadiyo xasaradda Suuriya.
Ciidamada Turkiga ayaa gobolka Idlib kula dagaallamaya Kuwa dowladda Suuriya ee uu taageero Ruushka.
Dhinaca kale, Giriigga ayaa culeys badan kala kulmaya sidii uu u maareyn lahaa 20,000 oo qaxootiga magangalyo doon ah oo ku sugan jasiiradda Lesbos, kuwaasoo ku nool xeryo.
Previous articleSomaliland oo ku dhawaaqday tartan caalamiya oo hablaha u gaara
Next articleMadaxweynayaasha Turkiga iyo Ruushka oo heshiis xabad-joojin ah wada gaadhay